Baga geeysan, Baga ittiin nugahe -
bilisummaa January 5, 2015	Leave a comment
Sochii barattootaa kan ilaalu,sochiin barattootaa Oromiyaa ifdanda’ee gara<<Sochii barattoota Oromiyaa kan sadarkaa addunyaa>>tti if jijjiiruu qaba. Hoggansa mataa isaa kan sochii barattootaa bifa wareegamni ittixiqqaatuun qindeeysuu fii sochii kana irraa dubbatu kan beekkomtii sadarkaa addunyaatti qabu ijaaramuu qaba. Akka kana qofaan irrkattummaa dhaabbiilee siyaasaa irraa bilisoomuu danda’a.
Hawaasni keenya gama isaatiin qabsoo jalqabe itti fufuun madditti <<Jaarya hawaasa Oromoo kan sadarkaa addunyaa>> dhaabuu irratti hojjachuu qaba.
Tags Injifannoo omn tokkummaa ULFO walaummaa
Previous Adeemsa bulchinsa haqaa dhabeesaa sirna wayyaane
Next Eebba Fiilmii MARSII MOOYI irratti haala oo’aan gad geeyfame